Xildhibaan Sadiiq Warfaa: Waa In Miisaaniyadda Baarlaamaanku Ka Madax Bannaanaato Xukuumadda – Kalfadhi
Xoghayaha guddiga difaaca ee Golaha Shacabka xildhibaan Sadiiq Warfaa oo uu warramay warbaahinta Kalfadhi ayaa sheegay in haddii la rabo in si sax ah baarlamaanku u guto shaqadiisa ay tahay in uu helo miisaaniyad ka madax bannaan xukuumadda iyo wasaaradda maaliyadda.
Xildhibaan warfaa waxa uu sheegay in haddii baarlamaanku uu helo miisaaniyad ka madax bannaan xukuumadda ay suurgal tahay in si hufan ay golayaashu u qabsadaan shaqadooda oo ay ka mid tahay la xisaabtanka xukuumadda iyo korjoogteynteedaba.
“ annaga [annaga] waa in miisaaniyaddeenu ka madax bannaantahay wasaaradda maaliyadda iyo xukuumadda” ayuu yiri xildhibaan warfaa oo u warramayay Kalfadhi.
Sidoo kale waxaan wax ka weydiinay soojeedin uu ka sameeyay Golaha Shacabka kulankii ugu dambeeyay taasoo oo ahayd in xildhibaannada lasiiyo qarashaad dheeri ah.
Xildhibaan Sadiiq ayaa sheegay in soojeedintaas ay gacanta ku hayaan hadda guddiga xeer-hoosaad-ka ee Golaha Shacabka, ujeedkuna uu ahaa in mudane walba oo ka tirsan Golaha shacabka lasiiyo lacag dhan 10-kun oo dollar oo ka madax bannaan mushaaraadkiisa iyo gunnooyinkiisa, si marka fasaxyada la galo ay ugu qarash gareeyaan deegaan doorashadooda.
In adeegyada dowladda loogu geeyo meelkasta, isku xirka dowladda iyo dadweynaha iyo in dadku aaminaan dowladnimada ayuu ku sheegay ujeedadii uu kalahaa soojedinta isla markaana uu rejeynayo marka goluhu uu farmo laga dodo.
Guddoomiyaha Golaha Shacabka Oo Kulan La Qaatay Guddiga Garsoorka, Awqaafta Iyo Arrimaha Diinta